Gmail horeyba waxay usoo bandhigtay shaqada jadwalka dirista emaylka | Androidsis
Gmail hadda waxay kuu ogolaaneysaa inaad jadwal u sameyso emaylka si rasmi ah
Gmail on Android waxay soo bandhigeysay isbedelo badan usbuucyo. Dhowr usbuuc ka hor barnaamijka boostada ayaa wax ka beddelay naqshadiisa, oo aan dhammaan qanci dhamaan isticmaaleyaasha. Intaa waxaa dheer, howlo ayaa la soo saaray si loogu oggolaado in si wanaagsan loo isticmaalo. Midka ugu horreeya ee arrintan la xiriira wuxuu ahaa qoraal caqli badan, in aan hore u isticmaali karno. Waxaa sidoo kale la xaqiijiyay in fariimaha la ogolaan doono in la qorsheeyo.
Ugu dambeyntii, ka dib markii aan ku dhawaaqay toddobaadyo ka hor, xilligii ayaa la gaadhay. Sababtoo ah Gmail horeyba wuxuu noo ogolaaday inaan jadwal u dirno dirista emaylka. Hawsha ayaa durba laga dhex bilaabay adeegsadayaasha boostada Google. Ficil loogu yeeray inuu beddelo waxyaabo badan.
Google hadda waa jiraa u dabbaaldegaya shan iyo toban sano oo adeeg email ah. Sidaa darteed, waxay timaaddaa waqti wanaagsan, si loo muujiyo isbeddelka weyn ee ay ku soo jirtay sannadihii la soo dhaafay. Tan iyo markii hawshan jadwalka jadwalka dirista emaylku ay ahayd wax ay isticmaaleyaashu sugayeen muddo dheer. Ugu dambeyntiina, waxaa si rasmi ah looga dhigay.
1 Jadwal ugu dir boostada Gmail
2 Sida jadwalka emaylka loogu qoro Gmail
Jadwal ugu dir boostada Gmail
Suurtagalnimada in jadwal loo sameeyo dirista emayllada ku jira Gmail waa wax faa'iido badan yeelan kara. Iskusoo wada duuboo, waxay fure u noqon kartaa isticmaaleyaasha xirfadleyda ah, kuwaas oo jadwal u sameyn kara dirista emaylka markay fasax ku jiraan. Sidoo kale haddii ay tahay inay u diraan emayl dalal kale, kuwaas oo ku jira aag kale oo waqti ah. Si markaa loo soo diro xilli qofka kale la heli karo. Xaqiiqdii waxay leedahay fursado badan, sidaa darteed waxay ahayd wax la filayay muddo dheer. Ugu dambeyntiina, Gogole waxaa lagu dhiirrigeliyey inuu soo bandhigo. Farxad badan.
Waxay ahayd shalay oo ay taariikhdu ahayd 1-da Abriil, markii la shaaciyay soo bandhigideeda. Qaarkood waxay u egtahay inay u egtahay kaftanka maalinta nacasyada bisha Abriil, laakiin waxba run ugama sii dheereyn karaan. Waa hawl durba si rasmi ah loo hawl galiyay Gmail, dhammaan noocyadeeda. Marka haddii aadan horey u haysan, waa inaysan ku qaadan waqti dheer inaad gasho barnaamijka. Waa arrin fudud in la sugo inay rasmi noqoto.
Shaki la'aan, waa daqiiqad muhiim u ah adeegsadayaasha ku jira Gmail. Maaddaama ay sidoo kale timaaddo daqiiqad muhiim ah oo loogu talagalay boosteejada boostada. Sababtoo ah maanta oo ay taariikhdu tahay Abriil 2 waa taariikhda uu Inboxku si joogto ah u xirmayo, sida loo xayeysiiyay dhowr toddobaad ka hor. Dareenkan, Gmail waa mid ka mid ah beddelka weyn ee barnaamijkan. Marka haysashada astaamo cusub oo xiiso leh waa wax ka caawin kara dadka isticmaala inay u wareegaan adeeggan.
Sida jadwalka emaylka loogu qoro Gmail
In kasta oo shaqadu si tartiib tartiib ah u soo baxeyso, animation yar oo Google ay noo diyaarisay waad arki kartaa sida ay u shaqeyso. Marka ay timaado jadwalka emaylka, dhibaato badan nagama lahaan doonto. Mar alla markii aan ku qorno emailka su'aasha ku jira Gmail, qeybta dirista ee xagga sare, waa inaad gujisaa saddexda qodob ee toosan ee aan halkaas ku haysanno.
Adoo gujinaya iyaga waxaan helnaa taxane xulashooyin dheeri ah. Mid ka mid ah xulashooyinka aan helnay ayaa ah inaan jadwal u dhigno dirista boostada la sheegay. Markaa waxa kaliya ee ay tahay inaan sameyno waa dooro markaan rabno emaylkan in lagu diro Gmail. Mabda 'ahaan maahan wax leh dhibaatooyin badan. Markaa waxaan ku baari karnaa dhammaan e-mayllada aan dooneyno barnaamijka laftiisa ama nooca desktop-ka.
Astaantan ayaa horeyba uga socota adduunka oo dhan. Xaaladdayda, markii iigu dambaysay ee aan hubiyo xalay wali ma helin shaqadii. Laakiin saacadaha soo socda ee maanta oo dhan waa inay mar horeba run noqotaa. Marka ugu dhakhsaha badan ayaa hadda loo isticmaali karaa. Sideed u aragtaa shaqadan ku jirta barnaamijka boostada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Gmail hadda waxay kuu ogolaaneysaa inaad jadwal u sameyso emaylka si rasmi ah
Waqtigan xaadirka ah, weli ma haysto. Miyay sidoo kale lagu heli doonaa nooca biraawsarka?